एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा र सम्पत्तिको सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्छ । राष्ट्र गरीव हुँदै गएको छ, व्यक्ति र व्यापारी, नेता र प्रशासक धनी हुँदै गएका छन् । व्यक्तिले धन कमाउनु पर्छ, व्यक्ति सम्पन्न हुँदा राष्ट्र कंगाल हुँदैन । व्यक्ति राष्ट्रको पहिचान हो, प्रतिनिधि हो भने राष्ट्र विपन्न भएर केही व्यक्तिमात्र सम्पन्न हुनु भनेको बेइमानी मौलायो भन्ने हो । रुखमा ऐंजेरु लाग्यो भने ऐजेरु बढ्दै जान्छ तर रुख सुक्दै सुक्दै जाने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र सुक्दै सुक्दै जानु र केही शासक प्रशासक, व्यापारी उद्यमी, दलाली गर्नेहरुमात्र सम्पन्न हुनु भनेको यो देशलाई आर्थिक अपराधीहरुको ऐंजेरु लाग्यो भन्ने हो । यस्तो कसरी सम्भव भइरहेको छ ? यसमा कसकसको संलग्नता, सेटिङ छ । देशलाई केही व्यक्तिले लुट्ने र सिंगो मुलुक बेथिति र हाहाकारमा हुनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुनपुग्यो ? यसबारेमा अव चासो राख्ने र अनुसन्धान गर्ने बेला भयो ।
निकै चर्चा चलेको हो स्वीस बैकमा नेपालीको थुप्रै पैसा जम्मा छ । पहिले राजारानीको हल्ला थियो, अहिले केही नेता, व्यापारी, उद्यमी र विचौलियाहरुको नाम चर्चामा छ । त्यसमाथि पनामा पेपर्सले सूचना लिक गरेपछि त्यसमा डेढदर्जन नेपालीहरुको नाम आयो । यस्तै नाम पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको नाम पनि आएको थियो, उनले प्रधानमन्त्री पद नै त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो र त्यागे । सत्ता परिवर्तन हुनसक्ने कति भरपर्दो रहेछ पनामा पेपर्सको सूचना लिक । त्यही पनामा पेपर्समा नेपालीको पनि नाम आयो तर अनुसन्धान शून्य । यस्तो पनि हुन्छ ? ०३६, ०४६ र ०६३ को परिवर्तनमा पनि स्वीस बैंकको चर्चा चलेको थियो । यतिखेर सनसनी फैलिएको छ– स्वीस बैंकमा नेपालीले ९ अर्व धन जम्मा गरेका छन् । अहिले पनामा पेपर्सले ५ खर्ब रहेको भनेको छ ।
को हुनसक्छन् ती ९ अर्व स्वीस बैंकमा जम्मा गर्नेहरु ? पनामा पेपर्समा नाम आएकाहरुको आर्थिक र व्यापारिक हैसियत के हुन् ? र, जतिपनि विदेशमा धन थुपारिएको छ, ती सबै कालो धन अर्थात भ्रष्टाचार गरेको धन हो । यसमा लोकवादी नेताहरु समेत मुछिएका छन् । जो पनि हुनसक्छन् स्वीस बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेहरु । यसमा प्रशासक, व्यापारी, लोकतन्त्रवादी नेताहरुको नाम विशेष रुपमा चर्चामा आइरहेको छ । राष्ट्रले चाहने हो भने तिनको बहीखाता खोल्न त्यति गाह्रो पनि नहोला । तर, बर्तमान लोकवादी नेताहरुको अकूत सम्पत्ति स्वीस बैंकमा छ भन्ने लोकआवाजलाई संवोधन गर्न जरुरी छ र नेताहरुले आफूलाई चोखो साबित गर्न पनि त्यसको छानबिनको नैतिक माग गर्न सक्नुपर्छ ।
गरीव नेपालीको स्वीस वैंकमा कालोधन । बैंकिङ नियमले जे भन्ला, राष्ट्रले खोजी गर्नुपर्ने हो । अन्य बैंकहरुमा पनि नेपालीको थुप्रै पैसा जम्मा रहेको आशंका गर्न सकिने आधार छन् । स्वीस बैंक खासगरी ब्ल्याक मनी लुकाउने थलोको रुपमा रहेको छ । अख्तियारमा परेको उजूरी र बैद्यसमूहले लगाएको आरोप अनुसार पनि एमाओवादी नेताहरुले जनयुद्धकालका, लडाकुको भ्रष्टाचार गरेको रकम पनि हुनसक्ने अनुमान गरिदैछ । केही ठूला कर्मचारीहरु समेत कालोधनमा बदनाम भएका छन् । यसकारण राष्ट्रले कालोधनबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ ।
आश्चर्य छ कि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले विदेशी बैंकमा नेपालका कस कसको कति पैसा छ भनेर खोज्ने काम गरेकै छैन । सीआइवी र अन्य निकायहरु पनि यसमा उदासीन रहेका छन् । सरकारका सुरक्षा स्रोतहरुले पनि त्यस्तो अनुसन्धानका काम गरेको देखिदैन । अव स्पष्ट भइसकेको छ कि नेपाली पैसा स्वीस बैंकमा थुप्रिएर रहेको छ । पैसा फिर्ता ल्याउने र पैसाका जम्माकर्तालाई नेपाली जनमानसमा मुखुण्डो उतारिदिने काम सरकारको हो । तर सरकारमा नै भ्रष्टहरुको रजगज भएकाले कालोधन बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
भारतमा मोदी सरकार आएपछि स्वीस बैंकमा ४० हजार करोड भारतीयको पैसा जम्मा रहेको भनेर त्यसको खोजबिन सुरु गरेको छ । उनले त पुराना नोट खारेज पनि गरिसके । मोदी सरकारले विदेशी बैंकमा लुकाएको रकम खोज्न न्यायाधिशको नेतृत्वमा एउटा समिति नै गठन गरेको छ । कालोधन फर्काएर भारतमा विकास र जनतालाई राहत दिने योजना मोदी सरकारले बनाइसकेको छ । तर नेपालमा किन कालोधनबारे न्यायिक आयोग गठन हनु नसकेको ?